C/raxmaan C/Shakuur" Farmaajo & taliskiisa weli kama quusan muddo kororsi" - Awdinle Online
C/raxmaan C/Shakuur” Farmaajo & taliskiisa weli kama quusan muddo kororsi”
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo taliska nabad suggida in ay doonayaan in ay dalka galiyaan khalalaase Siyaasadeed.
Hoggaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa xusay in Muddo kororsi ay ka raadinayaan guddiga ka tirsan nabad sugida iyo taageerayaasha baraha bulshada.
Madaxweyne Farmaajo iyo taliskiisa nabadsugidda welin kama quusan muddo kororsi, sababtoo ah wey ogyihiin in aysan doorasho xalaal ah ku guulaysan karin. Waxey doorteen waddo qalaalase abuur ah oo uu billawgeedu yahay guddi doorasho oo xubno nabadsugid iyo CBB u badan.
Previous articleLaamaha Amniga oo xabsiga dhigay Wiil & Aabihiis oo dil geystay
Next articleLaba Dhalinyaro ah oo lagu dilay Magaalada Boosaaso